धमाधम चलचित्रको छायांकन सुरु तर हलमा दर्शक ठप्प, निर्मातालाई कति असर ? - Reel Mandu
धमाधम चलचित्रको छायांकन सुरु तर हलमा दर्शक ठप्प, निर्मातालाई कति असर ?
सरकारले पौष २६ गतेबाट हल खोल्ने निर्णय गरेपछि कोभिडका कारण मारमा परेको चलचित्र क्षेत्र लयमा फर्किने कोशिश गर्दैछ छ भने चलचित्रको छायांकन पनि सुरु हुन थालेको छ । सरकारले निर्णय नगर्दै कात्तिकको १ गतेबाट चलचित्रहरु ‘ए मेरो हजुर ४ र आई एम ट्वान्टी वान’को छायांकन सुरु भएको थियो ।
यस्तै, सरकारले चलचित्र छायांकन र प्रदर्शनको अनुमती दिएपछि आधा दर्जन चलचित्र फ्लोरमा छन् । हाल धमाधम छायांकन भैरहेका चलचित्रहरु ‘हिड्दा हिड्दै’,‘डिसेम्बर फल्स’, ‘कौसिद’, ‘तिम्रो मेरो साथ’,‘परदेशी २’, ‘मनसँग मन’, ‘चुरीफुरी’ आदि रहेका छन् भने केहि चलचित्रहरुको पोष्ट प्रोडक्सनको काम धमाधम भैरहेको छ।
हाल धमाधम छायांकन भैरहेका चलचित्रहरुले कोभिड्कै कारण फिल्म प्रदर्शन मिति तोक्न सकिरहेका छैनन्। कोभिड-१९ को अन्त्य कहिले हुन्छ र दर्शकहरु फिल्म हेर्न निर्धक्क फिल्म हेर्न हलसम्म पुग्छन त्यो अझै अन्योल नै छ। यसरी हेर्दा लाग्छ धमाधम छायांकन र पोष्ट प्रोडक्सनमा काम भईरहेका फिल्म निर्मातालाई भने निकै मार परेको छ।